Boxen247.com, Umbhali kwiNombolo ye-1 yeWebhusayithi yaseYurophu
Izithuba ngu-Boxen 24/7:
27 EyeNkanga 2021
USixto Suazo ujongene neRance Ward kwisihloko se-UBO yengingqi e-Atlanta ngo-Dec. 19
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	One Slick Boxer Promotions, Iwadi yeRance, Sixto Suazo, Suazo vs. Ward, The Atlanta Holiday Season Hit Fest, UBO, Umbutho waManqindi kwindalo iphela	0
On December 19, at the Marriott Century Center in Atlanta, the Universal Boxing Organization™ (UBO) International Middleweight title will be at stake in the main event when One Slick Boxer Promotions presents its final card of the year.
In an attempt to win his first professional championship, local favourite Sixto Suazo takes on Louisiana-resident Rance Ward in what could turn out to be a very crowd-pleasing encounter between ambitious fighters.
Suazo (32) has been very active in 2021, putting together five wins and a draw so far, to bring his record to a fine 9-1-1 (7).
But in Ward (27) he will be facing an opponent who is just as hungry to become UBO champion.
Ward is much better than his somewhat mediocre 5-3-1 (2) ledger suggests. He has never been stopped, and last May he was competitive when losing a decision to 18-1 Winfred Harris Jr. Since then he has rebounded with a victory in August.
Billed as The Atlanta Holiday Season Hit Fest, the UBO title fight will be preceded by a strong undercard featuring additional local talent in well-matched fights.
Ukuba uyayithanda into esiyenzayo, nceda ucinge ngomnikelo wakanye ukusinceda ukuba sikhule kwaye sikuzisele iindaba ezininzi zamanqindi kunye neziphumo (unokwenza intlawulo ephindaphindiweyo). Konke kukhuselekile kwaye ngePayPal...cofa nje umfanekiso wePayPal ongezantsi:
Bhalisa kwi-eyethu Isiteshi seYouTube esitsha ngeendaba zamva nje zamanqindi kunye neziphumo, intlebendwane kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje umfanekiso ongezantsi okanye nayiphi na imifanekiso kuyo yonke imidiya yethu yoluntu:
Uluhlu lweminyhadala yamanqindi esiza kuyigubungela bukhoma kunye nekhadi elibonisa ukuba alikho semthethweni (umsitho ophambili), cofa le khonkco ilandelayo > Live Boxing Results & Event
I-Eubank Jr. vs. Liam Williams iya kuMgqibelo kaJanuwari 29 ngenxa yokwenzakala
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	IBHOKISI, UChris Eubank Jr., Eubank Omnci. vs. Williams, U-Liam Williams	0
26 EyeNkanga 2021
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UBilal Laggoune, UChristian Lopez, UHarry Mullins, UJack Massey, UJosh Holmes, UKhaleel Madjid, UMarius Vysniauskas, UMark Jeffers, UMichel Garcia, Naeem Ali, UNathaniel Collins, URuslan Berchuk, UThembani Mbangatha, UZak Miller	0
Ifoto ngetyala: @dvisionfilming
Jack Massey vs. Isiphumo Bilal Laggoune
Ihotele yaseBolton Whites, eNgilani-nge-26 kaNovemba ka-2021
UJack Massey W TKO 3 UBilal Laggoune
Isihloko se-IBO World Cruiserweight
Imizuzu engama-12x 3
UJack Massey is the new International Boxing Organisation (IBO) World Cruiserweight champion after demolishing UBilal Laggoune in three rounds in a career-best performance at a packed out Bolton Whites Hotel on November 26.
UMark Jeffers I-PTS UD 10 UMichel Garcia
Isihloko seWBO seGlobal Super Middleweight
Imizuzu engama-10x 3
Jeffers was given a decent workout by another Belgian visitor, UMichel Garcia, before claiming the World Boxing Organisation (WBO) Global Super-Middleweight belt. Garcia had only lost one in 16 prior to the contest but despite looking ‘fleshy’ on the scales proved that appearances are deceptive. Mark – the taller man – was the aggressor throughout the ten round fight, and ultimately claimed a wide and decisive points victory – winning every round on two of the judges scorecards – but wasn’t able to finish the contest early. Garcia proved to be ring-savvy and game as he toughed out the rounds, with Chorley’s unbeaten Jeffers probably learning more in this fight than in his previous 13.
UKhaleel Madjid W RTD 2 Naeem Ali
Imizuzu engama-4x 3
Amanqaku okulwa: Ikona ye-Ali yakhupha phakathi kwemijikelo ye-2-3, ikhankanya ukulimala kwe-eardrum.
UNathaniel Collins U KO 9 UThembani Mbangatha
Isihloko sobunzima be-Commonwealth
Collins – making the first defence of his Commonwealth Featherweight Title – was predicted to be in deep against South Africa’s UThembani Mbangatha, who came to the UK unbeaten in 11 with five KOs. In truth though, the Scot though dealt with his opponent with relative ease, proving the class that his stellar amateur career had previously promised. Mbangatha was in great shape and had some success, but was ultimately no match for the clever skills from Collins, who had his man down in the eighth before ending matters in the ninth of a scheduled twelve. Nathaniel remains unbeaten in nine – four KOs – and looks a special talent.
UZak Miller I-PTS 6 UChristian Lopez
Ubunzima bosiba obukhulu
Imizuzu engama-6x 3
Amanqaku okulwa: Amanqaku oosompempe ayengama-60-55 okuphumelela amanqaku eMiller.
UJosh Holmes W TKO 8 URuslan Berchuk
Imizuzu engama-8x 3
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumisa kwe-TKO laliyi-2:48 ye-8 kunye nomjikelo wokugqibela wokuphumelela kweHolmes.
UHarry Mullins I-PTS 4 UMarius Vysniauskas
Amanqaku okulwa: Amanqaku oosompempe ayengama-40-37 ekuphumeleleni kwamanqaku e-Mullins.
25 EyeNkanga 2021
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UMuhammad Waseem, URober Barrera, Waseem vs. Barrera	0
UMuhammad Waseem vs. URober Barrera
IPaki yoTyalo-mali yeMotospace eDubai, eDubai, eUnited Arab Emirates – nge-26 kaNovemba ka-2021
UMuhammad Waseem wasePakistan uza kuqubisana noRober Barrera waseColombia ngomhla wama-26 kweyeNkanga eMotospace Dubai Investment Park, eDubai, eUnited Arab Emirates, kukhuphiswano lweWorld Boxing Council Silver flyweight.
UWaseem, owayesakuba yintshatsheli yeWBC yeSilivere neyayilwela intshinga yehlabathi ye-IBF, unyukile kuluhlu emva kokufumana impumelelo emithathu ilandelelana emva kokubethwa kwakhe nguMoruti Mthalane waseMzantsi Afrika.
UBarrera, onerekhodi yokuphumelela engama-23, ilahleko ezi-3 kunye nokunkqonkqozwa kwe-13, uya kufuna ukufumana uloyiso oluya kumqhubela kuqikelelo olukhulu lwehlabathi.
Umlo ubanjwe yi-D4G Promotions kwaye iya kuboniswa kwi-ESPN +
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Alvarez vs. Makabu, Canelo, Canelo vs. Makabu, Ilunga Makabu, USawule Alvarez, USawule Canelo Alvarez	0
USaul “Canelo” Álvarez vs. Ilunga Makabu
IBhunga leHlabathi lamanqindi libambe iNkomfa yalo yonyaka engama-59 kwiveki ephelileyo kwiHotele entle yePresident Intercontinental kwisiXeko saseMexico.
Esi siganeko sikhulu sasizele ngamaxesha angalibalekiyo; nangona kunjalo, enye yezona zinto zinika imincili yenzeka kuValo oluKhulu, njengoko intshatsheli engenakuphikiswa kudidi lwesuper middleweight, uSaul “Canelo” Álvarez edibene ngobubele waza wabulisa intshatsheli yeWBC kudidi lwecruiserweight, u-Ilunga Makabu, oza kuba ngumchasi wakhe olandelayo:
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Harris vs. Flores, UHector Gabriel Flores, UJay Harris	0
U-Jay Harris unethemba lokuba uloyiso ku-Hector Gabriel Flores lunokumbeka kumzila okhawulezileyo wokudutyulwa kwewonga lehlabathi kwi-108lbs – njengoko la madoda mabini elungiselela ukudibana kwiwonga elingenamntu leWBA Intercontinental light-flyweight ngoLwesihlanu #MTKFightNight.
Badibana kwi-co-promotion phakathi kwe-MTK Global kunye ne-Mo Ngaphambili kwi-Vale Sports Arena e-Cardiff ngoLwesihlanu - kunye nomcimbi osasazwa bukhoma e-US kwi-ESPN + ngokubambisana ne-Top Rank, kunye nehlabathi jikelele kwi-IFL TV.
Harris (18-2, 9 KOs) ihla ukusuka flyweight ukukhuphisana eklasini ubunzima entsha xa ejongene Flores engabethwa (18-0-4, 9 KOs), kunye umlo Swansea has amabhongo ezinkulu kweli division ubunzima.
UHarris wathi: “Ndonwabe kakhulu ngokubuyela eWales. Andizange ndilwe apho ukusukela ngo-2019 kwaye ndijonge kwisihlwele sasekhaya. Ndithatha uninzi lwabalandeli phaya phezulu ukusuka eSwansea, kwaye sinomnye umfana waseSwansea okwityala eBen Crocker, ke ndiyakholwa ukuba iya kushukuma.
“Ndonwabile ngulo mcelimngeni mtsha kweli candelo litsha lobunzima. Ndenze ilitye eli-8 ngokukhululeka okokugqibela, ke ngoku ndilungele esi sahluko sitsha. Umchasi wam uHector Flores akabethwanga ngokuphumelela kwe-18 kunye nokutsalwa kwe-4, kwaye ndibone iividiyo ezimbalwa zeminye imilo yakhe.
“Andimboni ebhetele kunoJulio Cesar Martinez noRicardo Sandoval. Ndibalwele abo babini kwaye ndiyakholelwa ukuba ngabona bantu baseMexico babalaseleyo emhlabeni kwezi zisindo zisezantsi. Ngokuqinisekileyo uya kuba ngumdlalo kwaye omelele, kodwa ndilungele nantoni na.
“Ndizilolongile kwaye ndonga kakhulu, kwaye ndicinga ukuba abalandeli bazakuba nomdla. Ndicinga ukuba uzakuza ngqo phambili, ngoko kufanele ukuba kuqhume kwaye kuya kubakho iziqhumane. Kumnandi ukulwela itayitile kwangoko. Ikunika loo buzz eyongezelelweyo, kwaye andinakulinda ukongeza ibhanti ye-WBA Intercontinental kwingqokelela yam.
“Icandelo lelight-flyweight likhuphisana kakhulu. Ndikhe ndajonga zonke iintshatsheli zehlabathi kunye nabo bacela umngeni kufutshane phezulu, kwaye ndijonge phambili ukukhuphisana nabo. Ndingavuya ukutsibela ngqo kwiwonga lehlabathi emva kwalo mlo. Ndiza kubona ukuba iMTK Global icinga ntoni kwaye ukuba iyafika, kodwa ndiza kuba ngaphezulu kokulungela. "
Kwenye indawo ngetyala langoLwesihlanu, u-Akeem Ennis Brown ujongene noDaniel Alejandro Combi kwiwonga elingenamntu leWBC International super-lightweight, uJacob Robinson uthatha uAngelo Dragone kwiwonga elingenamntu leWelsh Area featherweight, kunye nenye italente yaseWales iya kuboniswa, njengoRashid. U-Omar, uEthan George, uMiles Gordon, uKryan Jones, uBen Crocker noMano Lee bonke bakwintshukumo.
24 EyeNkanga 2021
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UGeorge Kambosos Jr, ILopéz vs Kambosos Jr., UTeofimo López	0
UTeofimo Lopez vs. George Kambosos Omnci.
I-Madison Square Garden eNew York, eMelika-nge-27 kaNovemba ka-2021
UTeofimo Lopez u lumkise UGeorge Kambosos Jr. ukuba 'uThixo uya kumthoba' ngenxa yokungahloniphi usapho lwakhe xa ekhusela i-IBF, WBO, WBA, WBC Franchise & Ring Magazine World Lightweight intshinga ngobusuku bangoMgqibelo (27 Novemba) eHulu Theatre eMadison Square Garden eNew York. kwiDAZN.
AMATHIKTHI AYATHENGISWA NGOKU UKUSUKA KWI-35 yeedola (KUNYE IMALI)
U-Lopez (16-0 12 KOs) ekugqibeleni ubeka amabhanti akhe emgceni ngokuchasene nesinyanzelo sakhe se-IBF, ephelisa i-saga eqhuba ixesha elide phakathi kwentshatsheli kunye ne-Australian engoyiswanga, kunye neenzame ezimbini zangaphambili zokubeka umlo ziwile.
'I-Takeover' iphelile isithuba esingangonyaka ukususela oko wongeze ibhanti likaVasiliy Lomachenko kwisithsaba sakhe se-IBF eLas Vegas ngo-Okthobha odlulileyo kumboniso omangalisayo kwaye ubuyele kwisixeko sakhe lokuzalwa apho wawuseka umlo nge-KO kabuhlungu. ngaphezulu kukaRichard Commey kwi-MSG ngoDisemba ka-2019.
Lo mfana uneminyaka engama-24 ubudala uzimisele ukubonisa ukuba uyintshatsheli yabantu abatsha elandela ekhondweni likaMuhammad Ali obalaseleyo – kwaye uyakuyibonisa loo nto nge-KO eyohlwayayo ku-'Ferocious' Kambosos Omnci.
“Kufuneka uyazi indawo yakho kwaye ngoMgqibelo, uThixo uza kuyithoba le ndoda, ngam,” watsho lopez. “Uninzi lwaba bantu banamabhongo kwaye kulungile, kufuneka ube njalo. Kodwa eyona nto ikukuba, ngamanye amaxesha awuyifumani kuba mhlawumbi awuyi kuyithwala ngendlela eyiyo. Awuzukuba yintshatsheli yabantu. Uza kuchitha imali yakho kuwe kunokuba ubuyisele njengoko uninzi lwabalweli besenza.
“Yonke into imalunga nokuba yintshatsheli yabantu. UAli wayengoyena mkhulu kulo lonke ixesha kwezo zinto. Wenza impembelelo eyomeleleyo, eyomeleleyo kwezemidlalo, ngoko ke kuGeorge, andinambeko kuye konke konke.
“Indlela yokungamhloniphi, awumhloniphi uMama wam? Ndabaxelela, ndamlumkisa, umphathi wakhe 'ungathethi ngosapho lwam'. Ndithe bangathetha enye into, bathethe sh*t ngam, bathi ndiliphela, imbovane. Kodwa xa uthe wawela loo mgca, loo mqobo; f*ck umphathi wakhe uPeter Kahn kunye no-f*ck George Kambosos Omnci.
“Ndiyabulela kuba iDAZN iwuthathile lo mlo, ndibulela u-Eddie Hearn naye wonke umntu odlale indima kulo. Ndikwi zone nakwi DAZN. Kuyintsikelelo ukuba lapha kodwa lixesha lokuba siqale sibeke abantu endaweni yabo, nexesha lokuba bahlale phantsi bathobeke. Ndiye ndathobeka kwaye ndithobekile. Kukho inqaku lokuba kufuneka ubethe aba bafana. "
ULopez noKambosos bangquzulane ngobusuku obumangalisayo bemidlalo eNew York, ngenkxaso ephambili enikwe kwidabi elingenamntu le-IBF World Super-Featherweight phakathi. Azinga Fuzile (15-1 9 KOs) kunye UKenichi Ogawa (I-25-1-1 28 KOs).
URaymond Ford (9-0-1 5 KOs) ungqubana ne UFeliksi Caraballo (13-3-2 9 KOs) ngaphezulu kwemijikelo elishumi, Ukuhlaziya iMati (11-0 7 KOs) imilo kwi turf ekhaya ngokuchasene UNicholas Pablo Demario(15-5-3 9 KOs) phezu kwemijikelo esibhozo, Chinese Heavyweight UZhilei Zhang (22-0-1 17 KOs) ithatha UCraig Lewis (14-4-1 8 KOs) ngaphezulu kwemijikelo esibhozo, URamla Ali (3-0) yenza umva emva imilo eMelika kumjikelo ezintandathu nxamnye Isela Vera (1-0) kwaye kukho ukulwa okwesibini kwabasetyhini kwikhadi kunye neNew York UChristina Cruz (1-0) udibana UMaryguenn Vellinga (3-1-2 2 KOs) phezu kwemijikelo emine.
5-0 uDmytro Zubko uqubisana no-Achiko Odikadze kwintshinga ye-UBO yengingqi nge-8 kaDec.
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	U-Achiko Odikadze, Dmytro Zubko, UBO, Umbutho waManqindi kwindalo iphela, Zubko vs. Odikadze	0
eKiev, eUkraine – nge-8 kaDisemba 2021
Iphunyeziwe kwi-amateurs, ijongwe kakhulu ithemba laseUkraine uDmytro Zubko (5-0, 3 KOs) akacwangcisi ukumosha naliphi na ixesha kwizikhundla eziphezulu.
Ngomhla we-8 kaDisemba eKiev, ngaphantsi konyaka emva kokuba eqale umdlalo wakhe wokuqala ohlawulelwayo, uZubko uza kunyuka alwele intshinga ye-Universal Boxing Organisation™ (UBO) International Welterweight engenamntu.
Lo mfana oneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala ubethe abadlali bakhe abangoyiswanga kubadlali bakhe ababini bamva nje, kodwa kumlo wakhe wokuqala wesihloko uzakube ekunye nomchasi onamava kakhulu.
Kwikona echaseneyo kuya kuba ngu-Achiko Odikadze waseGeorgia (23-18-1, 8 KOs), oye walwa inkcaso enhle kakhulu ukususela ekuqaleni kwakhe ngo-2015, kwaye uyeza uloyiso lo Oktobha udlulileyo.
Ngaphandle kokuba namava kakhulu, u-Odikadze (22) ngumntu osemazantsi kwaye kulindeleke ukuba abonise umngeni wokwenyani kuZubko, ocingelwa ukuba uza kuba yintshatsheli yehlabathi yexesha elizayo.
Umlo wentshinga kaZubko vs Odikadze UBO International Welterweight uzakuphakanyiswa yiChampion Boxing Promotions.
UTeofimo Lopez ujongene noGeorge Kambosos Omnci. ngalo Mgqibelo kwiDAZN
Ithiyetha yaseMadison Square Garden eNew York, eMelika-nge-27 kaNovemba ka-2021
UTeofimo Lopez kunye noGeorge Kambosos Omnci bazakufumana umlo wabo ekudala bewulindile weWorld Boxing Association (WBA) lightweight super Championship ngoMgqibelo eMadison Square Garden Theatre eNew York.
Ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kukaLopez kunye noKambosos bekusetafileni kangangeenyanga ezininzi kodwa iingxaki ezahlukeneyo ezifana neziphumo ezilungileyo ze-Covid 19 kwintshatsheli kunye notshintsho lomkhuthazi endleleni, bekulibazisa umlo.
UTeofimo uya kwenza ukhuselo lokuqala lwesithsaba esimnyama kunye negolide, asiphumeleleyo kuVasyl Lomachenko ngo-Oktobha wonyaka ophelileyo. Kwiminyaka nje engama-24 ubudala, ummi waseMelika oyinzalelwane yaseHonduran ukwaphethe izithsaba ze-IBF, WBO kunye ne-WBC.
“I-Takeover” iza kuphuma kunyaka wonke ingenzi nto ukuze ibonise ukuba isikhundla sayo sikwindawo yokuqala kweli candelo, kodwa kuya kufuneka iphumelele uvavanyo olunzima kuKambosos, umlo ongeyiyo ongayi kuba lula kukumkani.
Le ndoda yase-Australia eneminyaka engama-28 ubudala iza kumdlalo emva kokoyisa igqala u-Lee Selby. Unomdlalo wamanqindi olungileyo, amandla ahloniphekileyo kunye nomsebenzi omde owenza ukuba afanelekele ukujongana nowona mlo ubalaseleyo welo xesha.
Kule veki imisebenzi yokukhangisa eyahlukeneyo iya kwenzeka kwaye ngolwesiHlanu iya kuba ngumlinganiselo osemthethweni apho bobabini baya kufuneka balinganise iikhilogram ze-135 ukuba bafanelekele ukulwa. UTeofimo uphumelele i-career eli-16 kunye ne-12 yokunkqonkqozwa, ngelixa i-Kambosos ine-10 yokunkqonkqoza kwi-19 yoloyiso.
UJack Massey: Ndiza kumisa
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBilal Laggoune, UBilly Deniz, UCharlie Schofield, UDan Catlin, Indawo yokulwa, UHarry Mullins, IBO, Umbutho wamanqindi weHlabathi, UJack Massey, UJosh Holmes, UKhaleel Madjid, UMark Jeffers, IMassey ngokuchasene neLaggoune, UMichel Garcia, UNathaniel Collins, UThembani Mbangatha, UZak Miller	0
UJack Massey vs Bilal Laggoune
Yenzelwe okanye ikhefu UJack Massey ngalo Lwesihlanu (26 Novemba), kunye cruiserweight enkulu kumlo omkhulu ebomini bakhe nxamnye UBilal Laggoune kuMbutho wamanqindi weHlabathi (IBO) World Title, live on Indawo yokulwa.
Esi sibini siya kudibana kwiHotele egcweleyo yaseBolton Whites kwindawo enomkhuhlane oya kubona ophumeleleyo eqhubela phambili - ngokunokwenzeka - imilo yomanyano, kwaye nabani na ophume kwindawo yesibini ebuyela kwibhodi yokuzoba.
Owayesakuba yintshatsheli ephambili equka ukuphumelela kwe-ABA Title ezimbini, uJack wajika ngo-2013 kwaye ngelo xesha uphumelele iimpumelelo ezili-18, ii-KO ezilithoba, kunye nenye kuphela – enosukuzwano – woyiswa kumdlali waseLondon, uRichard Riakporhe. Uneminyaka eyi-28, uMassey, usenayo yonke into yokudlala kodwa uyazi ukuba umlo noLaggoune umele ithuba lakhe elikhulu lokungena kwihlabathi. I-'One Smack' isebenze nabagqugquzeli abohlukeneyo kodwa ukusukela oko watyikitya noDennis Hobson kunye noSteve Crump's Fight Academy ekuqaleni kwalo nyaka, le ndoda yaseMarple ilithathele ibhanti le-IBF yaseYurophu kwaye ngoku ifumana imbuyekezo yehlabathi.
ULaggoune waziwa kakhulu kubalandeli bomlo baseBritane ngomzamo wakhe wokuphulukana noTommy McCarthy waseNorthern Ireland ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo ngesithsaba se-EBU. Lo mlo ubusondelelene – kukho ijaji enye ebambeneyo – kodwa amakhadi abekwe ecaleni kukaMcCarthy, oqhubeka kumhlaba wase-UK kwaye uLaggoune ewamkele umlo ngexesha elifutshane. Ungaphazamisi nangona kunjalo, iBelgian inokulwa nje ilahleko ezimbini ukusuka ku-29 ukuphuma, kunye ne-KOs eyi-14 ebonisa ukuba uthwala ukumba.
UJack noBilal badibana okokuqala kwiiveki ezidlulileyo kwinkomfa yabezindaba ukubhengeza umboniso. Ngoku, ngentsimbi yokuqala ekufutshane, iBrit ithi umchasi wakhe ubonakalisa ukuzithemba kodwa oko akuyi kwanela ukumkhupha emlo.
“Ubonakala njengomntu oqeqeshiweyo kwaye kwakungekho ntiyo phakathi kwethu,” watsho uJack. “Usemtsha kwaye uyakufuna; akakho ekupheleni komsebenzi wakhe, kwaye ulambile. Wayebonakala njengomntu ozithembileyo, kodwa kufuneka uzithembe ukuba uyangena kwaye ulwela itayitile yehlabathi. Ukuba awuzithembanga ngesakho izakhono ngoko unokuxhoma iiglavu phezulu.
“UBilal ngumlo olungileyo. Ukhe wajikeleza, ulwe nabafana benqanaba lehlabathi kwaye akayomagi. Unazo zonke ezo bhokisi ziphawulwe. Izakuba ngumlo onzima kodwa ndiyakholwa ukuba ndizokhwela phezu kwakhe mhlawumbi ndinqandeke.
Ndiyakholwa ukuba ndiza kumkhupha kwasekuqaleni; unesikweri kwaye uvule embindini. Ndizakumbhokisa kuqala, ndiqale ukumbamba kwaye xa ekhona ukuba abethelwe, nyusa amandla kwaye umise.
“Andikwazi kulinda, ndithengise amakhulu-khulu amatikiti kwaye umoya uza kubamangalisa. Ixesha libonakala lihamba kancinci kodwa lizofika ndingekalazi. Ndiyavuya kwaye ndinovalo, kancinci kuzo zombini, ukuba nabani na uthi akothuki, ugcwele ****! Ndidinga ezo mithambo-luvo ukuba zindivule kwaye ndilumke, kwaye ndiza kube ndikulungele ukuzisa ekhaya isihloko sehlabathi. "
I-Fight Academy ibakho ngokuhlwa kwitayitile yokulwa isihloko kwiBolton White's Hotel nge-26 kaNovemba. Eyona nto iphambili kulo mthetho uyilwayo yeNgilane UJack Massey naseBelgium UBilal Laggoune ukukhuphisana noMbutho wamanqindi waMazwe ngaMazwe ongenamntu (IBO) Isihloko seWorld Cruiserweight.
Inkxaso eyintloko ibona iNgilane UMark Jeffers naseBelgium UMichel Garcia Lwela i-WBO Global Super Middleweight Title engenamntu, kunye ne-Scotland UNathaniel Collins ukukhusela iTayitile ye-Commonwealth Featherweight ngokuchasene noMzantsi Afrika UThembani Mbangatha.
Kwakhona kuvela kwi-undercard's Fleetwood's UDan Catlin; eLondon UHarry Mullins; UZak Miller kwaye UCharlie Schofield ukusuka eAshton phantsi kukaLyne; EkaManchester UJosh Holmes kwaye UBilly Deniz, kunye neBolton's Khaleel Madjid.
IINKCUKACHA ZEENKCUKACHA ZOQHAGAMSHELWANO 01142 434 443.
UGilberto Ramirez akajongi ngaphaya kweYunieski Gonzalez ukuya kuDmitry Bivol
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	NguDmitry Bivol, UGilberto Ramirez, I-Ramirez vs González, Yunieski Gonzalez	0
UGilberto Ramirez vs. Yunieski Gonzalez
Kakhulu kusemngciphekweni kuGilberto "Zurdo" Ramirez ukuba Mexican engoyiswanga ukujonga ngaphaya yakhe Disemba 18th showdown kunye Yunieski "The Monster" Gonzalez (21-3, 17 KOs) ukuba World Boxing Association Light Heavyweight World Champion Dmitry Bivol.
Ayisiso kuphela indawo enyanzelekileyo yokuba ngumceli mngeni esisichengeni ngokuchasene noGonzalez ozalelwe eCuba, irekhodi eligqibeleleyo lama-42-0 (28 KOs) likwasendleleni ka "Zurdo" kumjikelo wakhe we-12 weWBA Light Heavyweight Title Eliminator udlala ngqo esuka eSan Antonio ( TX) kwiDAZN. Umkhuthazi kaRamirez, iGolden Boy Promotions, ubonisa lo msitho.
Andikhe ndijonge ngaphaya komnye umdlali endichasayo, ke akufuneki ndikuphephe ukujonga ngaphaya kukaGonzalez kulo mlo,” utshilo uRamirez. Ndiyazi ukuba uGonzalez ngumlo oza phambili othanda ukungquba nokulwa, ngoko ke kufuneka ndiyilumkele indlela yam. Njengaye nawuphi na umlo, amalungiselelo am alo mlo akatshintshanga. Iqela lam kunye nam sisagxile kwaye singaze sijonge ngaphaya koko kuphambi kwam. "
UGonzalez, 36, uphumelele imilo yakhe yokugqibela emithathu, emihlanu kwemithandathu, kuquka neWorld Boxing Council (WBC) engenanto iFedelatin Light Heavyweight Championship imilo emibini edlulileyo, awathi wayibamba ngomjikelo wesibini u-Alex Theran (22-4) Miami.
“UnguNombolo wesi-2 kubunzima bobunzima bokukhanya eCuba,” wongeze watsho uRamirez. “Ubeyingxaki kwabanye abantu, ngoko ke kuza kufuneka ndisebenze kakuhle. Akukho balweli abafanayo. Ndiyazi ukuba uGonzalez uyathanda ukuza ngaphambili ngaphezu komlo wakho wendabuko waseCuba, kodwa ngubani owaziyo ukuba isitayile sakhe siya kujongeka njani ngobusuku bokulwa? Ndilungiselela konke okunokwenzeka kwaye ndinethemba lokubonisa abalandeli nge-18 kaDisemba. "
URamirez, owokuqala waseMexico ukubamba isithsaba seHlabathi se-super middleweight, ulinganiswe iNombolo ye-4 yi-WBA, i-Gonzalez enguNombolo 5. Umchasi wabo oqhelekileyo nguTommy Karpency, owathatha umhlala-phantsi emva komjikelo wesine kwi-2019 ukuya kwi "Zurdo," kwaye yena. yamiswa nguYunieski kumjikelo wesibini kulo Msintsi uphelileyo.
“Ndizithembile kuqeqesho lwam nakulungiselelo lwam lwalo mlo,” uvale ngelo uRamirez. “Ndiyilungele imfazwe epheleleyo, okanye umdlalo wamanqindi obalaseleyo. Kodwa, njengesiqhelo, ndijonge ukumgqiba ndifumane impumelelo ye-KO.”
23 EyeNkanga 2021
I-15-0 iDenys Berinchyk ijongene no-Isa Chaniev e-Ukraine nge-18 kaDisemba
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Berinchyk vs. Chaniev, Uphika iBerinchyk, Isa Chaniev	0
I-Terminal Brovary Ice Arena e-Brovary, eUkraine – nge-18 kaDisemba ngo-2021
WBO International Lightweight onesihloko uDenys Berinchyk (15-0-0, 9 KOs) uya kujongana owayesakuba ngumceli mngeni kwisihloko IBF Isa Chaniev (15-3-0, 7 KOs) evela eRashiya kumsitho ophambili K2 PROMOTIONS show ngoDisemba 18 kwi Terminal Brovary Ice Arena. Umboniso uya kuxhaswa yi-PARIMATCH Ukraine (i-General Sponsor) kwaye iboniswe bukhoma kwi-MEGOGO.
I-Denys sele iphumelele i-15 kwimilo ye-15 (i-9 ngo-KO), ifumene ibhanti le-WBO Oriental Lightweight kwaye ubambe isihloko se-WBO International Lightweight ngoku. Ngoku ukwindawo yesi-3 kwi-WBO nakwi- #8 kwi-IBF. Ixesha lokugqibela uBerinchyk wangena kwindandatho ngoMatshi walo nyaka xa waphumelela phezu kweChile uJose Sanchez ngeTKO kumjikelo we-3. Emva koko, uDenys wazama isandla sakhe kwimilo engenanto kunye ne-KO'ed inkwenkwezi yaseRashiya u-Artem Lobov.
U-Isa Chaniev oneminyaka engama-29 uguqukele ekubeni ngumpetha ngoJanuwari ka-2015 kwaye ukusukela oko walwa imilo eli-18, wafumana impumelelo eyi-15 (esi-7 ngu-KO), ebambe izihloko ze-IBF Inter-Continental, iWBO International Lightweight kunye ne-IBF Youth Super Feather. NgoFebruwari ka-2019, u-Isa wajongana nomchasi ozayo kaLoma, uRichard Commey (waseGhana) kumlo we-IBF World Lightweight, apho umlo waseGhana waphumelela ngeTKO. Kumlo wakhe wokugqibela ngoJulayi uChaniev wabetha ngenkohlakalo ithemba elingoyiswayo uNurtas Azhbenov waseKazakhstan.
Ke ngoko, nge-18 kaDisemba iya kuba yingquzulwano ye-12-round yeWBO International itayitile, eyeyaseBerinchyk. Kwimeko yokuphumelela, uDenys uya komeleza isikhundla sakhe kumanqanaba ehlabathi kwaye asondele kubuNtshatsheli beHlabathi. Okwangoku uTeofimo Lopez uphumelele kwicandelo kwaye ulinde ukulwa noGeorge Cambosos ngoNovemba 27.
Ikhadi lokulwa lizakuba nomdla kwaye linika umdla, njengoko inani labalweli be-TOP Ukrainian baya kungena eringini: WBO Oriental Jr.Middleweigth Champion Dmytro Mytrofanov (11-0-1, 5 KOs), WBC Asian Champion Vladyslav Sirenko (18-- 0, 15 KOs), Khuseyn Baysangurov (19-1-0, 17 KOs), Vasyl Chebotar (9- zero, KO ezintathu), Oleksandr Spirko (20-0, 12 KOs) kunye nabanye.
I-PARIMATCH UKRAINE - uMxhasi Jikelele wesiganeko.
Bukela ngqo kwinkonzo yemidiya ye-MEGOGO!
UBadou Jack ujongene noSamuel Wawela kudidi lweCruiserweight eDubai ngalo Lwesihlanu
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBadou Jack, Jack vs. Wawela, USamuel Wawela	0
Badou Jack vs. Samuel Wawela
I-Motospace Dubai Investment Park, eDubai-26 Novemba 2021
Owayesakuba yintshatsheli yeHlabathi ye-Super Middleweight kunye ne-Global Philanthropist, u-Badou Jack (24-3-3, 14 KOs), ugqibezela amalungiselelo akhe kunye nenkampu yoqeqesho e-Dubai kwiphulo lakhe lokuqala kwi-Cruiserweight. Umlo wakhe nxamnye noSamuel Crossed (11-1-1, 7 KOs), ecwangciselwe i-26 kaNovemba kwi-ESPN + iya kuba nguJack wokuqala kwicandelo kunye namehlo abekwe kwi-3rd division World Title. Umjikelo onemijikelo eli-10, ekhuthazwa yi-Badou Jack Promotions kunye neProbellum, uya kuba kwi-D4G VIP Mema kuphela umcimbi kwi-Dubai Business Park.
“Eyona njongo yam kukuba yiNtshatsheli yeHlabathi kuMahluko amaThathu kwaye iqala ngoLwesihlanu eDubai” utshilo uJack kule nkampu yoqeqesho yakutshanje eDubai.
“USamuel Crossed ngumntu wokuqala kwindlela yam yolo sukelo. Ndizilolonge kakhulu kwaye andinakulinda ukwenza umboniso wabalandeli bam apha eDubai.”
"UBadou ebesoloko efuna ukulwa e-UAE phambi kweqela lakhe elikhulu labalandeli apho" utshilo umphathi we-Badou Jack Promotions u-Amer Abdallah. “Lo ngumlo wokuqala ka-Badou uhambela phezulu, ke emva komlo wokuqala oyimpumelelo uThixo Ethandile, uBadou uzakuqala ukujolisa kubanini-zithonga kudidi lwecruiserweight”.
UJack unikwe imbeko “iVisa yeGolide” eUnited Arab Emirates, enikwa abantu abadumileyo, abatyali-mali abakhulu kunye nabantu abakumgangatho ophezulu. “IDubai likhaya lam lesibini kwaye ndiyayithanda apha” watsho uJack. "Sijonge ukwenza iintshukumo ezinkulu kuMbindi Mpuma, kwaye kuhle ukuza kuthi ga ngoku."
“Sifumene unyango lweklasi yokuqala apha eDubai” utshilo umqeqeshi oyintloko uJohnathon Banks. “Amalungiselelo ayonto imangalisayo, yonke into oyifunayo yenzeke enkampini. Abamkeli bethu e-Five Palm Jumeirah bebemangalisa, le yeyona hotele ibalaseleyo eDubai, kwaye basiqengqela ikhaphethi ebomvu. Asinakulinda ukuba sibuyele apha ukuze siyenze kwakhona.”
Ngeendaba zakutsha nje zikaCanelo Alvarez onyukele kudidi lweCruiser ukuze acele umngeni kwiNtshatsheli yeWBC u-Ilunga Makabu, ukubakho komdlalo ka-Alvarez vs Jack wamkelwa ngokuphandle liQela likaJack. "Yonke into inokwenzeka kwaye ukuba loo mlo wenzeke, singathanda ukwenza loo mlo kuMbindi Mpuma kunye namaqabane ethu apha" wongezelela uAbdallah.
Ngolu suku: UGerry Peñaloza ukhusele isithsaba sakhe seWBC sodidi lwe-super flyweight
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UGerry Peñaloza, Peñaloza vs. Cho, Omncinci-Joo Cho	0
UGerry Peñaloza vs. Young-Joo Cho
I-Seongnam Gymnasium kwisiXeko saseSeongnam, eMzantsi Korea-23 kaNovemba 1997
Umzantsi weFilipino, uGerry Peñaloza wamisa umzantsi Korea, uYoung-Joo Cho, kumjikelo we-10, ekhusela isithsaba sakhe seWBC sodidi lweflyweight. Umlo ubuseSeongnam Gymnasium kwisiXeko saseSeongnam, eMzantsi Korea. Usompempe yayinguLuis Carlos Guzman. Abagwebi yayinguCarol Castellano, uMarty Sammon noKazumata Kuwata.
Amanqaku enkampu yoqeqesho kaIsaac Cruz kumlo weTank Davis nge-5 kaDisemba
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDavis vs. Cruz, UGervonta davis, UIsake Cruz	0
STAPLES Centre eLos Angeles, eMelika – nge-5 kaDisemba 2021
U-Isaac “Pitbull” Cruz owamkela i-Underdog indima edlala kudidi olunzima elwa nentshatsheli ye-WBA Lightweight Champion uGervonta “Tank” Davis, ophambili kwi-SHOWTIME PPV ngeCawe, umhla we-5 kaDisemba, kumsitho wePremier Boxing Champions ophuma kwiziko le-STAPLES Ilos Angeles.
“Ndibonakalise amaxesha ngamaxesha ukuba umnqweno wam wokuba yintshatsheli mkhulu kakhulu ukuba ungahoywa,” utshilo uCruz. “Lo mlo awusayi kuba wedwa. Ndiza kuphelisa ukucaphuka, kwaye inkwenkwezi entsha kraca iza kuzalwa nge-5 kaDisemba. "
U-Cruz oneminyaka engama-23 ubudala udibanise umlo ongama-21 engabethwanga ukuya kungquzulwano lwewonga lakhe lokuqala lehlabathi, kuquka nowayesakuba yintshatsheli uFrancisco Vargas ngesigqibo esivumelana ngamxhelo mnye nge-SHOWTIME ngoJuni. Ngoku, njengoko elungiselela ukujongana neenkwenkwezi ezikhula ngokukhawuleza uDavis, u-Cruz uzisa indlala ye-underdog kuzo zonke iinkalo zoqeqesho lwakhe.
“Inkuthazo yam yokuba ndibe kweyona nto ingcono yam kulo mlo yeyona nto iphambili kum imihla ngemihla,” utshilo uCruz. “Lo ngumlo ekudala ndiwuphupha. Umsebenzi esiwenzayo ejimini, i-run endiqhubela phambili kuyo, kunye noqeqesho lokuphucula imeko endityhalela kulo zonke ziphenjelelwa yinkuthazo yam yokulisebenzisa eli thuba kangangoko.”
Le ndoda yaseMexico-yinzalelwane yeyokugqibela kwimbali enzulu yosapho lwakhe kwezemidlalo. Ulandela emanyathelweni kayisemkhulu uMemo, uyise u-Isaac Sr., oomalume bakhe u-Eduardo noGuillermo, kunye nomntakwabo omdala u-Diego, bonke ababesilwa ngobuchwephesha. Nangona olo xinzelelo lwentsapho, u-Cruz wayenomdla ekuqaleni kwimidlalo ukuze azigcine ehamba ngendlela efanelekileyo ebomini.
“Imbethi manqindi ibisoloko isegazini kum, kodwa eyona nto eyandikhuthaza ukuba ndingene kumanqindi ndisengumntwana yayikukuzikhwebula kumzekelo ombi kunye neempembelelo ezimbi ekuhlaleni,” utshilo uCruz. “Ndandineminyaka emithandathu ubudala xa ndagqiba kwelokuba ndiye ejimini ngenye imini notatomkhulu, yaye ndayithanda kakhulu loo nto. Umdla womdlalo wazalwa, kwaye ngoku libali lothando eligcweleyo phakathi kwam namanqindi.”
Ukongeza kwintsapho yakhe, uCruz wayevile kwintshatsheli yaseMexico uJulio César Chávez ngaphambi kokukhusela umlo kaDavis. Incoko yajika yaba yinzululwazi kwaye yongeza enye into ekhuthazayo ku-Cruz ukuya kulo mlo.
“UChávez undixelele ukuba ndiqinisekise ukuba ndihlala ndilungile xa kunokwenzeka ukuba umlo noGervonta ube yinto yokwenene,” utshilo uCruz. “Emva koko, wandixelela ukuba ndinenkalipho efunekayo ukuze ndoyise uGervonta. Isibakala sokuba watsho kum sithetha lukhulu ngomkhondo endiye ndawenza njengomntu nanjengomlo.”
U-Cruz uya kukhangela ukuthatha ithuba lomdlalo oqinileyo wabalandeli bamanqindi baseMexico nabaseMexico-Amerika eLos Angeles abaya kuba sekoneni yakhe ngobusuku bokulwa noDavis. U-Cruz uyazi ukuba akanakuthembela kuyo ukuze imncede eringini nangona ilindelekile loo nto.
“Ndonwabe kakhulu ngokulwa eLos Angeles nabo bonke abalandeli baseMexico,” utshilo uCruz. “Kodwa kufuneka ndikhumbule ukuba ekugqibeleni iza kuba ndim noGervonta sijongane ubuso ngobuso eringini. Kakade ke, iyandikhuthaza into yokuba ndizive ndisekhaya. Kodwa andinakuyivumela ukuba indiphazamise okanye indikhohlisele ekubeni ndizithembe ngokugqith’ emgceni.
“Ukoyisa uGervonta Davis kuphela kwento esengqondweni yam. Xa ndiphumelele, ndiyazi ukuba uza kuwufuna umdlalo wempinda, kwaye ndingathembisa ukuba ndiza kuzilolonga ngokuphindwe kabini kulo mlo xa usenzeka.”
Amathikithi omcimbi ophilayo, akhuthazwa yi-Mayweather Promotions, i-GTD Promotions, kunye ne-TGB Promotions, zithengiswa ngoku kwaye zingathengwa kwi-AXS.com.
UStephen Fulton Omnci. kunye noRa'eese Aleem Roundtable ucaphula ngaphambi koMgqibelo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBrandon Figueroa, Fulton Omnci. vs. Figueroa, UStephen Fulton Jr.	0
UStephen Fulton Omnci. vs. Brandon Figueroa
UDolby Live ePark MGM eLas Vegas, eMelika-nge-27 kaNovemba ka-2021
Intshatsheli yehlabathi engoyiswanga ye-WBO ye-122-ponti uStephen Fulton Omnci kunye nongabethwanga uphezulu u-Ra'eese Aleem baphonononge ukhuphiswano lwabo ngexesha lomdlalo weqonga weendaba waseLas Vegas ngoMgqibelo, phambi kokuba bangene eringini kwiindawo ezinomtsalane ezahlukeneyo bahlala nge-SHOWTIME ngalo Mgqibelo, we-27 Novemba Umsitho weNkulumbuso yeBoxing Champions ovela eDolby Live ePark MGM eLas Vegas.
UFulton uya kusikwela ngokuchasene neNtshatsheli yeHlabathi ye-WBC Super Bantamweight uBrandon Figueroa kowona msitho uphambili, ngelixa u-Aleem elwa no-Eduardo Báez waseMexico kumsitho ophambili we-telecast, oqala nge-10 pm ET/7 pm PT.
Amatikiti omsitho ophilayo, okhuthazwa yi-TGB Promotions, ayathengiswa ngoku kwaye anokuthengwa kwi-ticketmaster.com.
Nantsi into eyathethwa nguFulton kunye no-Aleem, bobabini abaqeqesha eLas Vegas kumdlalo wangoMgqibelo, kwitheyibhile yeendaba kule mpelaveki iphelileyo:
USTEPHEN FULTON OMnci.
“Xa ndandisilwa e-Nevada ngexesha lee-amateurs, ndandisazi ukuba ndiza kubuyela apha ndisilwa eLas Vegas ngenye imini njenge-pro. Oku kunemvakalelo eyahlukileyo ngokupheleleyo kuyo kodwa ndigxile ekwenzeni umsebenzi wenziwe kwaye ndiphumelele.
“Ndivakalelwa kukuba le yeyona nto bendifanele ukuba ndiyayenza ngoku. Ndilapha ngesizathu. Andizukuvumela izibane ezikhanyayo zize kum. Ndenzelwe oku kwaye ndithatha loo ngqondo ndiyifake eringini.
“Emva kokuba ndibe yintshatsheli yehlabathi. Ndiphumelele iwonga lehlabathi kwicandelo endajika kulo, kwaye ngoku ndiyamanyana kumlo wam wokuqala njengentshatsheli. Ndifuna ukuqhubeka ndityhalela phambili kwaye ndingabi nakuphikiswa kolu didi lobunzima.
"Ukukwazi kwam ukulungelelanisa kunye nokucinga kweFigueroa kuya kuba ngumahluko. Andisathethi ke ngesantya sam namandla aphantsi. Ndiyazi ukuba uFigueroa uza kuphosa amanqindi amaninzi, kodwa ndiza kumenza aphoswe kwaye asebenzise iimpazamo zakhe.
“Wonke umntu unendlela eyahlukileyo kwaye kum ibithatha imilo eyingozi ngokuchasene neqela elingoyiswanga. Loo nto indenze ndangumlweli ongcono. Mhlawumbi ngendingazange ndithathe eminye yale milo, kodwa ngoku ndinale ngxelo inokuthi iqhubeke nabani na.”
“Ndichulumancile kakhulu ukubuya ndenza into endiyithandayo kwaye ndilwe ngekhadi elikhulu le-SHOWTIME. Kudala ndifumana sparring enkulu apha eLas Vegas kwaye ndiwulungele ngokupheleleyo uMgqibelo.
“Bendisebenza ngokuthatha ixesha lam eringini. Nokuba ndinomsindo, ndithatha ixesha lam ndisenza loo nto. Ukuba bendithathe ixesha lam noVic Pasillas kumlo wam wokugqibela, ngendimnqandile kumjikelo wesithandathu. Bendityhala isantya xa ndinganyanzelekanga.
“Ndingathanda ukulwa noStephen Fulton. Ndikholelwa ukuba ndingoyena ubalaseleyo kwicandelo kwaye abanye abantu bacinga ukuba ungoyena ubalaseleyo. Ukuba uyawuphumelela lo mlo ndiphumelele ngoMgqibelo, ngulo mlo endiwufunayo olandelayo. Ndikulungele ukuyenza yenzeke.
“Kufuneka ndiqhubeke nokuphumelela kwaye ndithethe amazwi amakhulu kuyo yonke imilo. Ndiza kuhlala ndifumana ukwamkelwa ngakumbi. Ndiyaqala ukubonisa abantu ukuba ndingubani ngokwenene kwaye andikwazi ukuyeka.
Ucaphula inkampu yoqeqesho kaRa'eese Aleem phambi kwaloMgqibelo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Aleem vs. Báez, UEduardo Baez, URa'eese Aleem	0
URa'eese Aleem vs. Eduardo Báez
Ayoyiswa super bantamweight URa'eese Aleem uya kujongela ukubethelela ngakumbi iwonga lakhe njengomntu okhuphisana phezulu xa ejongene neMexico Eduardo Báez kwi-10-round duel live on SHOWTIME Saturday, November 27 in a Premier Boxing Champions event from Dolby Live at Park MGM in Las Vegas.
I-SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING tripleheader iqala ngo-10pm ET/7 pm PT kwaye iphethwe ziintshatsheli zehlabathi ezingabethwanga kudidi lwe-super bantam ukuya-toe-toe njengeNtshatsheli yeWBC. UBrandon Figueroa ujongene neNtshatsheli yeWBO UStephen Fulton Jr. kungquzulwano lomanyano lwesihloko.
Amatikiti alo msitho udlalwa ngqo, nokhuthazwa yiTGB Promotions, ayathengiswa ngoku kwaye inokuthengwa kwi ticketmaster.com.
U-Aleem ubuyela kwindandatho emva kwengxelo yoloyiso ngoJanuwari kwi-SHOWTIME, njengoko wawisa i-Vic Pasillas engazange ibethelwe izihlandlo ezine kwindlela yakhe yokuphumelela i-11th ngeenxa zonke kwi-TKO. Nantsi into eyathethwa ngu-Aleem malunga nomdlalo wakhe we-27 kaNovemba kunye nokunye ukusuka kwinkampu yoqeqesho eLas Vegas:
Kwinkampu yakhe yoqeqesho yamva nje eLas Vegas kunye noMqeqeshi uBobby McCoy:
“Ndiphumile eringini ukusukela ngoJanuwari, kodwa ndiye ndahlala ndigxile. Umqeqeshi wam uBobby McCoy ebelungile ecaleni kwam ukusukela ngoko, kwaye kunye besisebenza nzima ukufikelela kweli nqanaba. I-sparring esinayo apha eVasgas yeyesibini ukuya kweyodwa, ngoko ndiyazi ukuba ndiza kulungela nantoni na u-Baez ayizisa. Ndimile kakuhle kwaye ndingoyena mntu ulambileyo ebomini bam. “
Kwimeko yokuphelisa isihloko se-WBA (u-Aleem wakhetha ukugcina umhla wakhe wokulwa no-Baez emva kokuba i-WBA iyalele umdlalo wokuphelisa ngokuchasene no-Azat Hovhannisyan):
“Njengoko abaninzi besazi, ndikhethe ukungalwi no-Azat Hovhannisyan kudidi lweWBA super bantamweight. Ingqondo yam ilula, ndiphumile eringini ukusukela ngoJanuwari. Ndingumlwi kwaye kufuneka ndilwe. Ndisebenze kakuhle kakhulu, kwaye umlo wam sele uhlehlisiwe kwakanye. Ndifuna ukukwazi ukungena kulo mlo, ndisebenze kwizinto ekufuneka ndiziphucule, ndize ndithathe umngeni olandelayo ophambi kwam.
“Kum, ukuhlala eshelufini nangaphezulu bekungekho ngqiqweni kweli nqanaba lomsebenzi wam. Ndingumlweli abalandeli abafuna ukubona ukujongana neentshatsheli zehlabathi ku-122-pounds. Ndibethe oyena mntu uyingozi kwicandelo kwiwonga lexeshana, ngoko ke bekufanele ukuba ndilwa nentshatsheli.”
Kumchasi wakhe, uEduardo Báez:
“UBáez ngumlo onzima woxinzelelo, kwaye kuya kufuneka ndiwulungele umlo onzima. Akakabethwa kwimilo yakhe yokugqibela elishumi elinambini, uphumelele ishumi elinanye kunye nokulingana kwanto. Ekuphela kokulahlekelwa kwakhe nguMauricio Lara, umlo okumgangatho wehlabathi. Lo mlo ndiwuthatha njengento ebaluleke kakhulu kuba olu luhlobo lomlo olunokonakalisa yonke into endiyisebenzeleyo.
“Ndiza kwenza ingxelo kulo mlo kwaye ndiwuphelise umlo phambi kokuba kukhale intsimbi yokugqibela. Ndiyazi ukuba akukho namnye kwabaphezulu ofuna ukulwa nam, ngaphandle kokuba imibutho yowiso-mthetho iyawanyanzela ukuba alwe nam, ngenxa yoko, kufuneka ndiqhubeke ndiphumelela.
“Ndicaphukile kuba ndiyazi ukuba ndingoyena didi lwesuper bantam emhlabeni. Bendibukele kakhulu uMarvin Hagler kwaye ndifumana inkuthazo kwibali lakhe. Ndiyazi ukuba ukuba ndihlala ndiphumelela ngendlela emangalisayo, abalandeli baya kufuna ukundibona kumlo omkhulu. Kude kube lelo xesha, kufuneka ndiqhubeke ndiphumelela.”
Ekulweni kwidolophu yakhe yaseLas Vegas:
“Ndifumana inkxaso eninzi eLas Vegas. Abantu abaninzi baza kuphuma beze kundibona ndisilwa. Ndibasindisile abalweli abakhulu abahlala apha, kwaye bonke bafuna ukundibona ndisebenza. Ndiziphatha njengomlo ozithobileyo, kodwa ndiyazi ukuba ndingoyena ubalaseleyo, kwaye ukuzithemba kwam kuviwa ngabo bandingqongileyo. Ndiyazi abanye bakholelwa kum, kwaye bafuna ukundibona ndisenza, ke oku kuya kuba lipati eliphumayo leeVegas zam. Ndivakalelwa kukuba ndiye ndawolwa yiLas Vegas, kwaye ngoku ndizimisele ukuphumelela kwidolophu yam entsha ndize ndibe lo mboniso.”
“Ndiyakuthanda ukulwa nge-SHOWTIME. Ndiziva ngathi ndikhulile ndingumlo kweli qonga liqala kwi I-ShoBox: Isizukulwana esitsha iqonga, kwaye emva koko ukuba nenkqonkqo ebalaseleyo iphumelele Vic Pasillas. Ndifuna ukuhlala ndisilwa kwi-SHOWTIME kuba abaphathi nabasebenzi bebesoloko bendiphethe kakuhle, kwaye ndiziva ndisekhaya apha.
“Ndifuna ophumelele iFigueroa vs. Fulton. Ukuba ophumeleleyo akayi kulwa nam, ngoko ihlabathi liya kwazi ukuba bayandikhohlisa, ukuba abangomajoni okwenene, kwaye abanakujongwa njengeentshatsheli zokwenyani kubalandeli. Ndifuna ukulwela iwonga lehlabathi, kwaye ndifuna wonke umntu obukele kwi-SHOWTIME azi ukuba indlala yam iyinyani. "
UMichael Jennings: UJeffers ulunge ngokuphindwe kabini kunam!
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBilal Laggoune, UBilly Deniz, UCharlie Schofield, UDan Catlin, Isikolo sokulwa, Indawo yokulwa, UHarry Mullins, UJack Massey, Jeffers vs. Garcia, UJosh Holmes, UKhaleel Madjid, UMark Jeffers, UMichel Garcia, UNathaniel Collins, UThembani Mbangatha, UZak Miller	0
UMark Jeffers (ophakathi) noMichael Jennings (ekunene)
UMark Jeffers vs. Michel Garcia
Ihotele yaseBolton's Whites, eNgilani - nge-26 kaNovemba ka-2021
UMichael Jennings uyazi into okanye ezimbini malunga nokuba phezulu kumdlalo wamanqindi wehlabathi. Ke, kufanelekile ukuqaphela xa eqikelela ikamva elikhulu lomlo wakhe, UMark Jeffers, phambi komlo omkhulu womsebenzi wakhe.
UJeffers uthatha iBelgium UMichel Garcia Ngomhla wama-26 kuNovemba woMbutho wamanqindi weHlabathi (i-WBO) we-Global Super-middleweight Title e-Bolton's Whites Hotel, nayo yonke intshukumo esasazwa ngqo lijelo lamanqindi elitsha elinika umdla, Indawo yokulwa. Olu khuphiswano ngomnye wemibhobho yenkxaso ye-co-chief Umlo kaJack Massey we-IBO World Cruiserweight ngokuchasene nomnye waseBelgium, uBilal Laggoune.
Umqeqeshi kaMark, uJennings, wayenomsebenzi wakhe ophumelele kakhulu ngexesha le-noughties. Ukusuka kuChorley - ngokufanayo noJeffers - uMichael walahlekelwa nje kathathu kwimilo engama-39 kwaye wayengumBritane, kunye neWBU World Welterweight Champion. Eyaziwa ngokuba namandla akhe amangalisayo, uJennings mhlawumbi ukhunjulwa kakhulu ngokucela umngeni kwelinye labadlali bamanqindi – Miguel Cotto – ngo-2009, ukoyiswa kwimijikelo emihlanu.
Ngaphambi komlo omkhulu phakathi kukaJeffers noGarcia - iMancunian idiliza amadoda omabini kwaye ichaza ukuba kutheni ikholelwa ukuba ibhanti leWBO Global liya kuzifumana lijikeleze esinqeni somlo wase-UK.
“UMichel ubonakala omelele kakhulu, ngumdlali ofanelekileyo wokulwela uxinzelelo kwaye ngokuqinisekileyo uza kulwa,” utshilo uJennings. “Naye unokugrumba, ngoko ke uMarko kufuneka avulwe kumjikelo wokuqala.
“Ndiyavuya nangona uGarcia eza kulwa. Ukuza kuthi ga ngoku, uMarko sele ekunye nabantwana abaza kukhwela phezulu, kodwa uye waba nemilo enzima efana no-Anthony Fox, ukubona ukuba uyintoni na. Abantwana abalwayo ngoku baya kuphumelela kwaye oko kuya kuhambelana noMarko emhlabeni, kwaye uya kuqala ukumisa abambalwa kubo.
“UMarko uzinikezele kakhulu, unentshukumo entle ngokwenene, izandla ezikhawulezayo kunye nokomelela okuhle. Kumntwana okwiminyaka yakhe, ukuzala kwakhe akukholelwa. Ngobusuku bokulwa, ukuba nje yonke into ikwikhulu leepesenti, uya kuqaqamba ngokufanelekileyo kwaye agqame.
“Mncinane kuphela kwaye akakakhuli ngokupheleleyo. Mhlawumbi akayi kufumana namandla omntu wakhe de abe neminyaka engama-25 kodwa, ubuchule-bulumko, ukuba umthelekisa nam kwiminyaka efanayo, ulungile ngokuphindwe kabini! Ukuba yonke into ihamba ngokucwangciswa, kwaye uhlala etyhalela phambili kwaye efumana imilo elungileyo, uya kwenza kakuhle kakhulu emdlalweni.
“Ndingathanda ukumbona engenelela kwinqanaba laseBritane kodwa usenexesha elininzi. Xa eqala ukuphumelela iziwonga, sifuna akwazi ukuzigcina. Sifuna ukuba ngabona babalaseleyo kwelo candelo. Xa sele ekulungele ukulwela iTitle yaseBritane sifuna abe ngumntu ekungekho mntu unokumoyisa.
“Ndizithembile ngalo mlo. Andizithembanga kakhulu kuba kuthatha isitofu esinye kuphela, kodwa xa usaphula omabini amajoni, uMark uneziphumo ezininzi ezintle.
22 EyeNkanga 2021
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Iholo yeArsenio, IDakota Laster, Ulawulo lweDKO, U-Elvis Figueroa, UFeliks Parrilla, UJeffrey Torres, UNelson Perez, URaymundo Ríos, URosekie Cristobal, UWilliam Foster III	0
Abalweli abahlanu abavela kwisitali soLawulo lwe-DKO bonke baphume beloyiso ngokunkqonkqoza kane eNewark, eNew Jersey kunye nesigqibo esivumelanayo eManchester, eNew Hampshire.
Kwihotele yaseRobert Treat eNewark, u-Elvis Figueroa onzima kakhulu, uWilliam Foster III, uJeffrey Torres ophantsi kunye noFelix Parrilla ophumeleleyo.
I-Figueroa yamisa i-Arsenio Hall kwimizuzwana ye-39 yomjikelo wesibini. UFigueroa wawisa iHolo kabini kumjikelo wokuvula, kwaye wawisa iHolo okwesithathu kwaye umlo wamiswa.
I-Figueroa yaseNew Haven, e-Connecticut ngoku i-9-0 kunye neenkqonkqo ezintandathu. IHolo yamiswa okokuqala kwaye ngoku i-3-5.
U-Foster uye waya ku-13-0 ngokubethwa okusithoba ngokukhupha u-Pedro Hernandez kumjikelo wokuvula. UFoster wafumana inqaku elinye, kwaye inzalelwane yaseNew Haven iya kukhangela umlo weprofayili ephezulu ekuqaleni kuka-2022.
UTorres wehla uRosekie Cristobal kathathu kwi-2nd round stop stop up to improve to 9-1 with five knockouts. UCristobal uwela kwi-15-6.
UParrilla waya ku-2-0 ngokubethwa kabini njengoko wayefuna nje imizuzwana engama-45 ukukhupha iDakota Laster.
UFigueroa, uFoster, uTorres kunye noParrilla balawulwa ngokubambisana nguMarilyn Rosa, baqeqeshwe nguLuis Rosa kwaye bakhuthazwa yi-KO Night Boxing.
Kwi-SNHU Arena eManchester, eNew Hampshire, uNelson Perez wahlala engoyiswanga ngesigqibo esinemijikelo emine evumelanayo malunga noRaymundo Rios kumdlalo omncinci we-welterweight.
Kumjikelo wokuqala, uPerez wehlise iRios ngekhonkco lasekhohlo. Kumjikelo wesibini, uPerez wathumela iRios phantsi kwakhona ngekhonkco lasekhohlo.
Perez, 140 lbs of Marlboro, MA iphumelele ngamanqaku 40-34 kuwo onke amakhadi, kwaye ngoku 5-0. I-Rios, i-139.6 lbs yaseMexico yi-3-8-2.
U-Andrew Maloney ucaphula inkampu yoqeqesho ngaphambi kwe-9 kaDisemba e-Australia
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UAndrew Moloney, Froilan Saludar, IMoloney vs. Saludar	0
Andrew Moloney vs. Froilan Saludar
Iziko lokuzonwabisa laseNewcastle eNewcastle, eNew South Wales eOstreliya-nge-9 kaDisemba 2021
Owayesakuba yiNtshatsheli yehlabathi u-Andrew Moloney 21-2 ulwa neePhilippines uFroilan Saludar 32-4 uhlala kwiFoxSports Australia, ngoLwesine Disemba 9th ukusuka kwiNewcastle Entertainment Centre eNewcastle, eNew South Wales Australia.
Nantsi into eyathethwa nguMoloney malunga noDisemba 9th Matchup kunye nokunye ukusuka kwinkampu yoqeqesho e-Australia;
Kwinkampu yakhe yoqeqesho yamva nje eOstreliya:
Ukulungiselela kwam lo mlo kube kuhle kakhulu! Ndaqalisa ukuzilolonga ngokukhawuleza nje ukuba ndibuyele eOstreliya emva kokulahlekelwa kwam nguJoshua Franco.
Ndiyakholelwa ukuba ndifunde lukhulu kula trilogy kwaye ndilambe kakhulu ukubuyela phezulu kwaye ndibe yiNtshatsheli yeHlabathi kwakhona.
Kuye kwakho i-buzz enkulu kwindawo yokuzivocavoca kunye noBruno Tarimo kunye nomntakwabo uJason bobabini belungiselela i-World Title Eliminators kunye nam ndilungiselela uDisemba 9. Sonke siye satyhalana kakhulu kwaye siye saba ne-sparring enkulu kunye Sydney osekwe Argentina Emiliano Tissera.
Kwinqanaba leWBO/IBF (uKazuto Ioka v Jerwin Ancajas kuthethwe ngoNyaka oMtsha eJapan):
Oku kuya kuba ngumlo omkhulu. Ngumlo endikholelwa ukuba ungahamba nangayiphi na indlela kwaye ngokuqinisekileyo omnye ndiza kuwujonga kakhulu.
Ndinethemba lokuba ndingalifumana ithuba lokulwela lowo uphumeleleyo lo mlo ngelinye ixesha ngo-2022.
Kumchasi wakhe, uFroilan Saludar:
USaludar ngumchasi onobungozi. Unamava kakhulu kwaye ilahleko yakhe ize kuphela kubalwi abakwinqanaba eliphezulu.
Uyaqhuma kwaye unokufikelela ixesha elide kodwa ndiyakholelwa ukuba ndiya kuba ndongeza enye ilahleko ye-KO kwirekhodi yakhe.
Ekulweni kwakhe okokuqala eOstreliya ngaphezulu kweminyaka emi-2:
Ndonwabile kakhulu ukuba ndilwe eOstreliya kwakhona okokuqala kwisithuba seminyaka emi-2. Umlo uza kuboniswa ngqo kwiFoxSports yase-Australia kunye ne-ESPN eMelika ngoko ke ndiceba ukwenza intetho, ndibonisa into endiyifundileyo kwimilo yam yakutshanje kunye nokudlala kakubi.
UJack Massey ujongene noBilal Laggoune kwi-IBO World Title ngoLwesihlanu eBolton
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBilal Laggoune, UBilly Deniz, UCharlie Schofield, UDan Catlin, Isikolo sokulwa, Indawo yokulwa, UHarry Mullins, IBO, Umbutho wamanqindi wamanye amazwe, UJack Massey, UJosh Holmes, UMark Jeffers, IMassey ngokuchasene neLaggoune, UMichel Garcia, UNathaniel Collins, UThembani Mbangatha, UZak Miller	0
UJack Massey vs. UBilal Laggoune
IBolton White's Hotel, eNgilani – 26 Novemba 2021
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	U-Anthony Hollaway, Lopez vs. Hollaway, Najee Lopez	0
Najee Lopez vs. Anthony Hollaway
IBuckhead Fight Club eAtlanta, GA – 19 Novemba 2021
Ithemba elikhulayo, uNajee Lopez (2-0, 2 KOs), uyaqhubeka ejika iintloko njengengcali, njengoko efumene iknockout eguqukayo yomjikelo wesibini phezolo, ngolweSihlanu, ngoNovemba 19, 2021, ngokuchasene no-Anthony Hollaway (3-1-2) , 3 KOs). I-4-round bout inomcimbi oyintloko kwaye yenzeke kwi-Buckhead Fight Club e-Atlanta, GA, idolophu yaseLopez, kwaye yakhuthazwa nguGarry Jonas wePro Box Promotions.
“Ndiza ngokukhawuleza nanzima kudidi lwecruiserweight. Kungekudala abantu bazondikhankanya nabadlali abafana no-Usyk no-Evander Holyfield,” utshilo uNajee Lopez emva kokufumana inqaku eliphumeleleyo elathi elinye iqela lakhe lawela ezintanjeni.
“Iqela lam belilindele ukufumana imijikelo emininzi kulo mfo, kodwa bendisazi ukuba ndiza kumnqanda kwangoko,” uqhubeke watsho u-Lopez. “Ndithobekile, kodwa ndiyayazi into endiyifunayo kulo mdlalo, kwaye ngoku sele iza kufika. Isinyathelo sokuqala siphumelele, kwaye okwesibini siphumelele ngendlela efanelekileyo. Mninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe, kodwa ndiyilungele nantoni na iqela lam elindigcinele yona.”
U-Lopez, owayesakuba ngu-Amateur owayebalasele “kuMnyhadala weOlimpiki wokuGqibela” e-Oxnard, eCalifornia, ngo-2019, wajika iintloko kulo msitho. Ukuyeka ukuqhubela phambili kwimizamo yokungena kwi-amateur realm, u-Lopez wajika waba yipro, kwaye ulawulwa nguTim VanNewhouse.
21 EyeNkanga 2021
URayJay Bermudez woyisa uDanny Flores kunye ne "Fall Brawl" iziphumo ezipheleleyo
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UAlex Rivera, UAndre Byrd, Austin Reed, Bermudez vs. Flores, UDaniel Bailey, UDanny Flores, UDavid Rohn, DeShawn Kennedy, Drew Ngokuhlala, UFrancis Hogan, Ginno Montoya, UJames Murrin, UJames Perella, UJonathan Eniz, UKenny Larson, UMarcus Davidson, UMarlon Hardnick Omnci., UMiguel Valencia, URayJay Bermudez, URohan Polanco, URonny Arana, URynell Griffin, USeigenald Daley Omnci, UShawn McCalman, UTroy Anderson Jr.	0
URayJay Bermudez (L) wabetha uDanny Flores (imifanekiso nguEmily Harney/Fightography)
I-Moseley's kwiCharles eDedham, Massachusetts, USA - 20 Novemba 2021
IiNkuthazo zeVertex zivale isizini yayo yokuqala ngesitayile phezolo kunye nomnyhadala wesine ngaphantsi kweentsuku ezingama-60, “Fall Brawl,” eMoseley eCharles eDedham, Massachusetts.
“Siziva silungile ngento esiyenzileyo, ngakumbi xa siqwalasela ukuba sisanda kuqalisa ukukhuthaza,” utshilo umkhuthazi weVertex uDave Clark. “Abalandeli nabalweli bayonwabela le nto siyenzayo. Senza izicwangciso zonyaka ozayo, kodwa asifuni ukuba kude kakhulu phambi kwethu. Sikwisingqi.”
Headliner RayJay “The Destroyer” Bermudez (14-0, 11 KOs) outclassed his tough yaseMexico umchasi, super lightweight Danny “Vendado” Flores (15-25-1, 8 KOs). U-Bermudez wawulwa ngomonde umlo wakhe, ebeka iipunch zamandla kwaye ehlala kude neepuntshi zikaFlores, ekhululekile kwaye engenamandla engena kwaye ephuma. Indibaniselwano yeenqindi ezintathu yabetha uFlores ekupheleni komjikelo wokuqala, uBermudez waphantse wabeka uFlores kude njengoko intsimbi yayikhala. UBermudez uqhubekile nokulawula isantya kwisesibini, ebetha uFlores ephinda-phinda, nangona uFlores wazama ukubhenela uBermudez kwingxabano phakathi kweyesithathu. Isicelo sakhe sabuyela umva njengoko uBermudez wambetha ngokutya okuqinileyo kwasekhohlo namalungelo.
Ukuqokelelwa kweeputshi ezityiwe nguFlores ekugqibeleni kwathatha ilahleko njengoko uBermudez wayesoloko ekrazula iinqindi ezikhohlakeleyo entloko nakumzimba kaFlores, phantse wawuphelisa umlo ekupheleni komjikelo wesine. I-Flores ngandlela thile yagcinwa, kodwa yaba yeyomzuzwana nje, njengoko uBermudez wancamathela uFlores entanjeni kwaye wadubula kumjikelo olandelayo. Ukubetha akuzange kuphele njengoko uFlores wacela okungakumbi kwaye uBermudez wavuma ngovuyo. Ekugqibeleni, uBermudez waphumelela isigqibo esinenkohlakalo esimijikelo esisi-8, kodwa uFlores wafumana imbeko kwimijikelo emithandathu enzima.
UBermudez, wase-Albany (NY), yintshatsheli ye-NBA Continental Junior Welterweight kunye ne-ABF American West Super Lightweight.
Kumsitho obambeneyo, ongahlulwanga Mansfield (MA) welterweight James “The Slim Reaper” Perella (8-0, 6 KOs) peppered Andre Byrd (8-11-2, 1 KO) kuzo zonke ii-engile, esebenzisa ubude nobude bakhe. ukusuka ngaphandle kwimijikelo emihlanu yokuqala. Kumjikelo wesithandathu, walwa ngakumbi ngaphakathi, ebetha amanqindi ka-Byrd, watshintshela kwimodi yokuhlasela ngowesixhenxe nowesibhozo. U-Byrd, nangona kunjalo, waxhoma kanzima kwaye wafikelela kwintsimbi yokugqibela, njengoko uPerella wathatha isigqibo esinecala elinye le-8. UPerella wayefuna ukujikeleza kwaye u-Byrd wamnika oko.
Umntu ophumelele kwiYunivesithi yaseMassachusetts eDartmouth, uPerella yintshatsheli ye-4 yase-USA yaseNew England kunye ne-4-time New England Golden Gloves Champion.
UJames Perella (L) wayefuna kwaye wangena kwimijikelo
Kwakhona yayilixesha leTanki! UFrancis “uFrank” Hogan ongoyiswanga kudidi lwe-welterweight ukholise abalandeli bakhe abakhulayo ngokuhlala egqibelele, ephumelele umlo wakhe wesithoba, ngamnye ngokunkqonkqoza. I-southerpaw eneminyaka engama-21 ubudala yankqonkqoza uRynell Griffin (8-49-2, 2 KOs) ngasemva kumjikelo wokuqala, yalandelwa ngokuwisa okwesibini ngehuku ekhohlo, kunye nohambo oluphindwe kabini ukuya kwiseyile kwinqanaba lesithathu. , de usompempe wawumisa umlo. Esebenzisa ilungelo lakhe njengesixhobo sokufumana uluhlu, ukongeza ekuthatheni ithuba lobude bakhe kunye nokufikelela kwizinto eziluncedo, ekhohlo lakhe elibulalayo lavala umboniso. UHogan, waseWeymouth (MA), yintshatsheli elawulayo yeNew Hampshire Super Welterweight Champion kunye nentshatsheli yeNew England yeGolden Gloves ka-2019.
UFrancis Hogan (R) wahlala efezekile
Intshatsheli yomkhosi wase-US yamaxesha amane "UkuZinikezela" UDaniel Bailey (8-0, 4 KOs, ukulwa ngaphandle kweTampa (FL), wagrumba uAustin Reed (10-0, 5 KOs), wamwisa umjikelo onelungelo elingaphezulu, kwaye wawuvala umboniso ekupheleni kwesakhelo esinye ngomthi ongasentla osekhohlo.. U-Bailey, umzala walowo wayesakuba yintshatsheli yehlabathi u-Randall Bailey, naye wafumana iwonga eliphezulu kwi-2012 Ringside National Tournament.
Ukulwa kumlo wakhe wokuqala ocwangcisiweyo onemijikelo esi-8, ngo-2020 i-Olympian yaseDominican Republic uRohan “El Rayo” Polanco (6-0, 3 KOs) uye wenyuka ngokokhuphiswano kwaye waluphumelela uvavanyo ngemibala ephaphazelayo ngokuchasene negqala laseArgentina elinobunzima obungasindi kakhulu uJonathan “El Potro. ” U-Eniz (27-16-1, 11 KOs), elawula umlo wesigqibo esiqinisekileyo.
Engoyiswanga “I-Amazing” uShawn McCalman uphucule irekhodi lakhe ukuya ku-10-0 (6 KOs), emisa u-super middleweight uDavid Rohn (0-10-1) ngokudutyulwa komzimba okutyumzayo ekuqaleni komjikelo wokuqala. UMcCalman, waseColorado, yintshatsheli elawulayo ye-ABF yaseMelika eNtshona.
Intandokazi yendawo iTroy Anderson, Jr. (3-0. 3 KOs), ukulwa ngaphandle kweDorchester ekufutshane (isithili saseBoston), yayininzi kakhulu ukuba uRonny Arana (0-3) angaphatha. Intshatsheli ye-Rocky Marciano Tournament ka-2016, u-Anderson we-southpaw ubonise iziseko eziqinileyo kulo lonke umlo, ebambe umchasi wakhe kwiintambo kumjikelo wesibini, kwaye esothula ipere engaphendulwanga ephindwe kabini. U-Anderson unqumle umsesane ngempumelelo kwisithathu, ecinezela umdlalo u-Arana, obonise iimpawu zokudinwa kodwa wasinda de kwasekupheleni. UAnderson ongaphawulwanga kangako wahamba umgama okwesihlandlo sokuqala kubomi bakhe obutsha, kodwa wavalwa ngesigqibo esimjikelo esi-4, ephumelela umjikelo ngamnye kumakhadi amanqaku abagwebi abathathu.
Kumjikelo wokuqala ocwangcisiweyo we-6 wobusuku, iNew Bedford middleweight uDrew “Tomahawk” Dwelly (4-0-2, 4 KOs) uhonjise uGinno Montoya (0-7) izihlandlo ezithathu kumjikelo wokuvula, owesibini kwi hook yasekhohlo. ukuya esiswini, uloyiso olukholisayo ngendlela yokunkqonkqoza kobugcisa.
U-Pro-debuting welterweight uMiguel Valencia, waseWorcester, uphumelele isigqibo semijikelo emi-4 yokwahlulahlula kuka-James Murrin waseBoston (1-1, 0 KOs) kumdlalo wokhuphiswano.
Puerto Rico-inzalelwane Alex Rivera (2-0, 2 KOs), ukulwa ngaphandle Southbridge (MA), out-ibhokisi featherweight DeShawn Kennedy (0-5) enroute ukuya umyalelo 4-round ngazwinye isigqibo.
Kansas City super lightweight uMarcus Davidson (2-0, 2 KOs) wayefuna kuphela imizuzwana emine ukuze aphumelele umlo wakhe ngokuchasene noMarlon Hardnick, Jr. Davidson wadlulela ngaphaya kweringi, waphosa indibaniselwano ye-2-punch, umva wabetha ekhohlo. hook owathumela umchasi wakhe kwiseyile, eyaphela umlo.
Kumdlalo wokuvula ngokuhlwa, u-Salem (MA) we-welterweight we-super uKenny Larson wayenomdlalo wokuqala ongenakulibaleka, ewisa uSeigenald Daley, Omnci. (0-2) phakathi kumjikelo wokuqala, kwaye emva kwexesha uLawson waqhagamshela ekunene kwiqhosha nelungelo. umnqamlezo owamthoba umchasi wakhe. Usompempe uKevin Hope uwuyekile umlo ngaphandle kokubala.
ISIGANEKO ESIBALULEKILEYO - IZIBONELELO EZIPHAKAMILEYO
URayJay Bermudez (15-0, 11 KOs), Albany, NY
UDanny Flores (15-26-1, 8 KOs), iSixeko saseMexico, kwiFedrito Federal, eMexico
I-CO-FEATURE - WELTERWEIGHTS
UJames Perella (9-0, 6 KOs), Mansfield, MA
OKUKHETHEKILEYO WELTERWEIGHT EZIZODWA
WTKO3 (1: 32)
URynell Griffin (8-49-2, 2 KOs), iLas Vegas, iNV
UBUDILI OBUPHAKATHI OBUPHAKAMILEYO
UShawn McCalman (10-0, 6 KOs), Aurora, CO
WTKO1 (1: 07)
UDavid Rohn (0-10-1), Vila Park, IL
UDrew Dwelly (4-0-2, 4 KOs), iNew Bedford, MA
WTKO1 (2: 26)
UGinno Montoya (0-7), Greenwood, NE
AMANQAKU aphezulu e-SUPER WELTERWEIGHTS
WTKO1 (2: 44)
USeigenald Daley, Jr. (0-2), Kalamazoo, MI
UMiguel Valencia (1-0), eWorcester, MA
UMarcus Davidson (2-0, 2 KOs), Kansas City, KS
WTKO1 (0: 04)
UMarlon Hardnick, Jr. (0-1), Kalamazoo, MI
WTKO1 (2: 50)
AMANQAKU ENTSHOLONGWANE KAKHULU
UDeShawn Kennedy (0-5), eHolland, MI
URonny Arana (0-3), eNew York, NY
U-Atif Oberlton woyisa iBrent Oren kunye ne-2300 Arena kwiziphumo zasePhiladelphia
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UAndres Abarca, UAtif Oberlton, Brent Oren, UDemon oselula, UEdgar Torres, UJames Bernadin, UJonathan Rodriguez, UJulian Gonzalez, UNicoy Clarke, Oberlton vs. Oren, Quadir Albright, URasheed Johnson, URoberto Pucheta, UTyriek Gainey, UWilliam Hernandez	0
2300 Arena, Philadelphia, USA – 20 Novemba 2021
U-Atif Oberlton wamisa uBrent Oren kumjikelo wesibini kumjikelo ocetyiweyo onemijikelo emithandathu phambi kwabaphulaphuli abaninzi kwi-2300 Arena.
Ikhadi le-bout esixhenxe liphakanyiswe yi-King's Promotions.
U-Oberlton wayenomonde kwangethuba njengoko wayefumana iipuntshi zamandla. Ekupheleni komjikelo wokuqala, u-Oberlton wamisa isandla sasekhohlo esilukhuni ibel. Ukuwisa okwesibini kwamkhathaza uOren waza umlo wamiswa ngo-1:38.
U-Oberlton waseFiladelphia wayesenza umdlalo wakhe wokuqala kwidolophu yakowabo kwaye ithemba elibhengezwe ngu-4-0 ngokubethwa okune. Oren of Harrisburg, PA yi 4-7.
U-Quadir Albright ebedinga nje imizuzwana engama-29 ukutshabalalisa uWilliam Hernandez kumlo wabo we-junior welterweight onemijikelo emithandathu.
UAlbright wafumana izithonga ezikhohlakeleyo ezenzakalisa uHernandez. U-Albright wafumana amanqindi anzima ngakumbi kuHernandez ongenakuzikhusela kwaye umlo wamiswa.
I-Albright yaseFiladelphia yi-4-0 kunye neengqungquthela ezine. UHernandez waseKent, WA. yi 7-2.
UJames Bernadin wenze umsebenzi okhawulezileyo ngokunqanda u-Edgar Torres kwimizuzwana nje engama-76 kumlo wabo we-welterweight onemijikelo emithandathu.
Kwimizuzwana yokuvula, uBernadin wawisa uTorres ngesandla sasekhohlo. Wayephezu kweTorres kwaye wafumana i-punch enzima kwaye i-bout yamiswa.
Bernadin of Lancaster, PA yi 5-0-1 kunye knockouts ezintathu. Torres of Woodbridge, VA yi 8-3-1.
U-Jonathan Rodriguez kunye noRoberto Pucheta bajijisana kwimijikelo emithandathu kukhuphiswano lwe-bantamweight.
Bobabini abalwi baphumelele amakhadi ngamanqaku angama-58-56 kunye nekhadi lesithathu lifundwe nakwi-57-57.
URodriguez waseBhetelehem, PA yi-9-1-1. I-Pucheta yaseMexico yi-10-20-3.
URasheed Johnson uphumelele isigqibo semijikelo emine yokwahlulwahlulwa kuka-Andres Abarca kumlo we-welterweight.
UJohnson waseFiladelphia wathatha amakhadi amabini nge-39-37 tallies, ngelixa u-Abarca ephumelele ikhadi 39-37.
UJohnson ngoku u-8-4. Abarca of Kent, WA yi 2-6.
UJulian Gonzalez wamisa uTyriek Gainey kumjikelo omnye ocwangciselwe imijikelo emine yodidi olusezantsi.
UGonzalez wawisa uGainey ngesandla sasekunene esiqinileyo. UGonzalez wafumana i-punch ye-punch eyenzakalisa uGainey kwiintambo kwaye umlo wamiswa ngo-2: 06.
Gainey of Reading, PA yi 5-0 kunye knockouts ezintlanu. Gainey of Paterson, NJ yi 0-2.
U-Devon Young wahlala engoyiswanga ngesigqibo esikwimijikelo emine engavumelananga noNicoy Clarke kumlo onzima.
Umncinci uphulukene nomdlalo weClarke kwaye waphumelela ngamanqaku angama-40-36 amakhadi.
Umncinci wase-Aiken, eMzantsi Carolina ngu-2-0. I-Clarke yesiXeko saseJersey, i-NJ yi-2-7.
URyan Rozicki uzakungenela iWBC Cruiserweight Top 10 emva komlo weRivas
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	cruiserweight, I-oscar rivas, Rozicki' vs. Rivas, URyan Rozicki, Ukunyuswa kweeNgonyama ezintathu, wbc	0
I-Three Lions Promotions (TLP) iyavuya ukwazisa ukuba i-WBC ithathe isigqibo sokubeka uRyan "Bruiser" Rozicki (13-1-0, 13KOs) waseSydney, eNova Scotia, njenge-cruiserweight elishumi ephezulu. Isigqibo sisiphumo esithe ngqo sokusebenza kukaRozicki ku-Oscar Rivas (28-1-0, 19KOs) kwisithsaba sokuqala sombutho. UMongameli we-WBC uMauricio Sulaimán, uSekela Mongameli we-WBC uMauro Betti, kunye noMongameli we-NABF uDuane Ford bonke basixhasa eso sigqibo.
“Ngokunyaniseka, bekufana nokutsala amazinyo kwikomiti ye-WBC,” ucacise watsho uDaniel Otter, uMlawuli oLawulayo we-TLP. “Kodwa bawubonile ukulunga kwendlela adlale ngayo uRyan ngokuchasene neRivas. Ngokuzingisa okuncinci, sikwazile ukubonisa ukuba ufanelwe kudidi oluphezulu lweshumi. Ndivakalelwa kukuba ufanele ukuba phakathi kwabahlanu abaphambili emva komdlalo, kodwa uzakubonisa ihlabathi ukuba ungowakhona kungekudala.”
Intshatsheli yeWBC kudidi lweBridgerweight u-Oscar Rivas naye ulinganisele kwireyithingi ka-Rozicki, exelela ikomiti ukuba, emva kokuchitha imijikelo elishumi elinesibini eringini nomdlali waseKhanada, ukholelwa ukuba uRozicki kufuneka abekwe kwindawo yokuqala okhuphisanayo kudidi lwecruiserweight kwihlabathi. Iwonga leWBC ngoku liphethwe nguIlunga Makabu waseKananga, eDemocratic Republic of the Congo.
Umbuzo wokuma kwenqanaba likaRozicki uye waba nomdla ngakumbi emva kweendaba zokuba intshatsheli yehlabathi engathandabuzekiyo kudidi lwe-super middleweight uSaul “Canelo” Alvarez uzimisele ukujongana nenkcaso equka icruiserweights. Umdlalo ophakathi kuka-Alvarez noMakabu we-WBC cruiserweight wabhengezwa kwakuloo ndibano.
U-Rozicki ubuyela kwisenzo ngoFebruwari 5, 2022, eSydney, eNova Scotia.
IiNkuthazo zeNgonyama ezintathu (TLP) yinkampani yokuthengisa amanqindi esemgangathweni esekelwe e-Ontario, eCanada. Ifakwe kwi-2016, i-TLP izimise njengenkulumbuso yenkampani yokuthengisa, eyaziwa kwihlabathi jikelele kumdlalo wamanqindi oqeqeshiweyo. I-TLP ikwabandakanyeka kunyuso lwengxowa-mali yemibutho engenzi nzuzo kweli naphesheya. Ngolwazi oluthe vetshe nceda undwendwele www.threelionspromotions.com.